ထိုင်းကိန်းဂဏန်းများ - ဝီကီပီးဒီးယား
ထိုင်းကိန်းဂဏန်းများ ( ထိုင်း: เลขไทย , RTGS: lek thai , အသံထွက် [lêːk tʰāj] ) သည် ရတနာကိုစင်ခေတ် တွင် အနောက်နိုင်ငံများကြောင့် အာရဗီကိန်းဂဏန်းများပိုမိုသုံးစွဲလာမှုကြော့်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်အစဉ်အလာအသုံးပြုသော ကိန်းဂဏန်းများ ဖြစ်သည်။ ထိုင်းကိန်းဂဏန်းများသည်အခြားကမ္ဘာ့နေရာများတွင်အသုံးပြုလေ့ ဟိန္ဒူ - အာရဗီဂဏန်းစနစ်ကို ကျင့်သုံးသည်။ ထိုင်းဘာသာဖြင့်ကိန်းဂဏန်းများသည်ပြုပြင်ထားသောနာမ်ကိုလိုက်နာလေ့ရှိပြီးအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိရှေ့တွင်ရှိသည်။
00င် ศูนย์ နေ /sǔːn/ Sanskrit śūnya
၁ 1 หนึ่ง nueng /nɯ̀ŋ/ (ai) ပရိုတို - Tai /nʉŋ/
၂2สอง သီချင်း /sɔ̌ːŋ/ ยี่ (yi) အလယျပိုငျးတရုတ် /saŋ/ (Min Nan Nan သီဆို 1 ကို နှိုင်းယှဉ်ပါ) နှင့် /nyijH/ (Min Nan 二 ji7နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ)
၃3สาม ဆမ် /sǎːm/ sam (ဆမ်) အလယျပိုငျးတရုတ် /sam/ (Hakka / Cantonese / sam 1 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ)
၄4สี่ si /sìː/ ไส (sai) အလယျပိုငျး Chinese sijH (Min Nan Nan si3နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ)
၅5ห้า ဟက်တာ /hâː/ (ngua) ဟောငျး /*ŋaʔ/ (Min Nan五NGO နှိုင်းယှဉ်။ )
၆6หก hok /hòk/ (lok) အလယျပိုငျးတရုတ် /ljuwk/ (Hakka + Cantonese 六 liok 8 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ)
၇7เจ็ด chet /t͡ɕèt/ (chet) အလယျပိုငျးတရုတ် /tshit/ (Min Nan chit4နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ)
၈ 8 แปด အချစ်ဇာတ်လမ်း /pɛ̀ːt/ (paet) Middle Chinese /peat/ (Cantonese八Pat4နှိုင်းယှဉ်)
၉9เก้า ကလို /kâːw/ (ချောင်း) အလယျပိုငျးတရုတ် /kjuwX/ (နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ Min Nan 九 kau2)
၁၀ 10 สิบ ငရုတ် /sìp/ (ချောင်း) Middle Chinese dzyip (နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ Min Nan (Hakka 十 sip 8 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ)
00င် ศูนย์ နေ /sǔːn/ ( Sanskrit śūnya)0င် សូន្យ /soun/0င် ສູນ /sǔːn/
၁ 1 หนึ่ง nueng /nɯ̀ŋ/ (ai) 1 មួយ /muəj/ 1 ນຶ່ງ /nɯ̌ŋ/
၂2สอง သီချင်း /sɔ̌ːŋ/ ยี่ (yi)2ពីរ /piː/2ສອງ /sǒːŋ/
၃3สาม ဆမ် /sǎːm/ sam (ဆမ်)3បី /ɓəj/3ສາມ /sǎːm/
၄4สี่ si /sìː/ ไส (sai)4បួន /ɓuən/4ສີ່ /sìː/
၅5ห้า ဟက်တာ /hâː/ (ngua)5ប្រាំ /pram/5ຫ້າ /hâː/
၆6หก hok hòk (lok)6ប្រាំមួយ /pram muəj/6ຫົກ /hók/
၇7เจ็ด chet /t͡ɕèt/ (chet)7ប្រាំពីរ /pram piː/7ເຈັດ /t͡ɕét/
၈ 8 แปด အချစ်ဇာတ်လမ်း /pɛ̀ːt/ (paet) 8 ប្រាំបី /pram ɓəj/ 8 ແປດ /pɛ́t/
၉9เก้า ကလို /kâːw/ (ချောင်း)9ប្រាំបួន /pram ɓuən/9ເກົ້າ /kâw/
၁၀ 10 สิบ ငရုတ် /sìp/ (ချောင်း) 10 ដប់ /ɗɑp/ 10 ສິບ /síp/
၁၀ 10 สิบ ငရုတ် /sìp/
၁၁ 11 เอ็ด sip et /sìp ʔèt/
၁၂ 12 สอง သီချင်းဆိုသည် /sìp sɔ̌ːŋ/
၂၀ 20 ยี่สิบ yi sip /jîː sìp/
၂၁ 21 เอ็ด yi sip et /jîː sìp ʔèt/
၂၂ 22 สอง သီချင်းဆို /jîː sìp sɔ̌ːŋ/
၃၀ 30 ရက် สามสิบ sam sip /sǎːm sìp/
၃၁ 31 เอ็ด sam sip et /sǎːm sìp ʔèt/
၃၂ 32 สอง sam sip သီချင်း /sǎːm sìp sɔ̌ːŋ/
၁၀၀ 100 အ ร้อย ရွယ် /rɔ́ːj/
1 000 1000 พัน Phan /pʰān/
10 000 10000 หมื่น muen /mɯ̀ːn/ အလယျပိုငျးတရုတ် / mʉɐnH / မှ
100 000 100000 แสน ခဏ /sɛ̌ːn/
1 000 000 1000000 ล้าน lan /láːn/
หนึ่ง thi nueng /tʰîː nɯ̀ŋ/ ပထမ
สอง သီဆို /tʰîː sɔ̌ːŋ/ ဒုတိယ
สาม thi sam /tʰîː sǎːm/ တတိယ
สี่ thi si /tʰîː sìː/ စတုတ်ထ
ที่ # thi # /tʰîː/ #st, #nd, #rd, #th
အာယ် ( ထိုင်း: อ้าย ) ကို၏,) "ပထမဦးဆုံး (သား) မွေးဖွား" သို့မဟုတ်ပဌမလဘို့, duean อ้ายเดือน (ai အသုံးပြုသည် ထိုင်းလပွက်ခဒိ ။
ဧက် (ထိုင်း: เอก)သည် ပါဠိသုံး ဧက ḗka, "တစ်ခု"မှာ လာသည်။ ဧက် ပထမ (အဆင့်), n antiquity,aseventh daughter was called luk ek (ลูกเอก), thoughaseventh son was luk chet (ลูกเจ็ด).
ဧတ် ( ထိုင်း: เอ็ด , ကွန်တန်ဘာသာ: 一 ယတ် 1 ; Minnan: one၊ it4) ကို "တစ်ခု" ဟုအဓိပ္ပာယ်ရပြီးပေါင်းစပ်သောနံပါတ်တစ်ခု၌နောက်ဆုံးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အသုံးပြုသည် (အပေါ်တွင်ဖော်ပြထားသောအဓိကနံပါတ်များကိုကြည့်ပါ) ။
ဒေါ ထိုင်း: โท ) ပါဠိ "နှစ်ခု" ကနေဖြစ်ပါတယ်။  Tho 'နှစ်ယောက်နှင့်ဒုတိယအဆင့်ရာထူးများအတွက်အသုံးပြုသည်' သေံအမှတ်အသားများ, ပညာရေးဒီဂရီနှင့်စစ်ရေးရာထူး။
Yi (ထိုင်း: ยี่, Cantonese: 二, yi6; Minnan: 二, ji7) is still used in several places in Thai language for the number two, apart from song (สอง): to construct twenty (two tens) and its combinations twenty-one through twenty-nine; to name the second month, duean yi (เดือนยี่), of the traditional Thai lunar calendar; and in the Thai northern dialect thin pha yip (ถิ่น–พายัพ), which refers to the Year of the Tiger.
တြိ ( ตรี ) နှင့် တြိုင် ( ไตร ) သည် သင်္သကရိုက်စာသုံးအဓိပ္ပာယ်အရ trāyaḥ, "သုံး"ဂဏန်းဖြစ်သည်။  ဤရွေ့ကားရွေးချယ်စရာသုံးခုအတွက်အသုံးပြုနေကြသည်; တတိယအဆင့် အသံအမှတ်အသားများ, ပညာရေးဒီဂရီနှင့်စစ်ရေးရာထူး ; သုံးယောက်အနက်အဓိပ္ပာယ်ဟာရှေ့ဆက်အဖြစ် (ခေါက်) ။
↑ Digital Dictionaries of South Asia Sir Ralph Lilley Turner (1888-1983) A Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Languages entry 6455
↑ Digital Dictionaries of South Asia Sir Ralph Lilley Turner (1888-1983) A Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Languages entry 5994
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ထိုင်းကိန်းဂဏန်းများ&oldid=703099" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၄၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။